BGR မော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
ဒီ corbreavirus ကုသမှုအသစ်ဟာငါတို့တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့မတူပဲ BGR
A new antiviral drug that might become the first oral medicine for the novel coronavirus is currently being tested, as Atea Pharmaceuticals has announcedadeal with Swiss giant Roche for development and distribution. The drug…
လျှော့စျေး Purell, Sonos ရောင်းချခြင်း၊ ၂၅ ဒေါ်လာနားကြပ်၊ Instant Pot လူသတ်သမားမှဒေါ်လာ ၄၀၊ ပိုများသော - BGR
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ link တစ်ခုမှတဆင့်လွတ်လပ်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တွဲဖက်ကော်မရှင်ရရှိနိုင်သည်။ အဆိုးမြင်သမားတစ် ဦး ကတနင်္ဂနွေသည်တစ် ၀ က်ကျော်ပြီဟုဆိုနိုင်သော်လည်းအကောင်းမြင်သူတစ်ယောက်ကပြော ဦး မှာပါသေးသည်။
အောက်တိုဘာ ၄ ရက်အပတ်အတွက် Netflix သို့သွားမည် - BGR
Netflix is adding 13 new shows, movies, and specials on the week of October 25th. New originals coming to Netflix this week include Blood of Zeus, Holidate, Nobody Sleeps in the Woods Tonight, and the third season of Suburra.…
အကယ်၍ ဤပရိဘောဂတစ်ခုခုသည်သင့်အိမ်၌ရှိပါက၎င်းကိုချက်ချင်းမသုံးပါနှင့် - BGR
Multiple new recalls over furniture have popped up recently, including goods from Crate and Barrel and its sister brand, CB2. The recalls affect bookshelves, chairs, and tables. The companies are offering refunds and…
Huawei သည် BGR ကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်
Huawei ဖုန်းများသည်ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင်ရောင်းအားကောင်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းတရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးသည်သောကြာနေ့တွင်ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ရှေ့ပြေးခက်ခဲသည့်လမ်းကိုညွှန်ပြနေသည်။ ကုမ္ပဏီအကြီးမားဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ…
ဒေါက်တာ Fauci သည်အရေးအကြီးဆုံး coronavirus သတိပေးချက်ကို BGR မှလူတိုင်းဖတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
Dr. Fauci recently said that trusting public health agencies is crucial if we ever want to defeat the coronavirus. Some agencies, like the CDC, have unfortunately modified statements and safety guidelines in response to…
Lysol မှုန်ရေမွှား, ပထမ 4th-gen Echo Dot သဘောတူညီချက်၊ Jabra နားကြပ်များ၊ LED light stripss များပိုမို - BGR
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ link တစ်ခုမှတဆင့်လွတ်လပ်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တွဲဖက်ကော်မရှင်ရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တနင်္ဂနွေနေ့များသည်အပူဆုံးနေ့စဉ်အရောင်းအ ၀ ယ်များအားလုံးကိုနေ့တိုင်းအစဉ်လိုက်စုဆောင်းထားသော်လည်း၊
Netflix သည်မကြာသေးမီကကြည့်ရှုနိုင်ဆုံးရုပ်ရှင် ၁၀ ခု၏စာရင်းကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ ထုတ်ယူခြင်းသည်အချိန်ကာလ၏အကြီးမားဆုံး Netflix ရုပ်ရှင်ဖြစ်သော်လည်း Kissing Booth 10၊ Project Power, Enola Holmes နှင့် The Old Guard အားလုံးသည်အသစ်စက်စက်ဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားယခုအချိန်တွင်နေထိုင်ရန်အဆိုးဆုံးပြည်နယ်များ - BGR
A ranking of the 50 U.S. states based onavariety of criteria shows which state is the “worst” right now. Coronavirus testing, unemployment, and poverty are all factored in. The worst state in the country pumps out roughly…
သုတေသီများသည်ကြီးမားသော coronavirus နက်နဲသောအရာဖြစ်သည့် BGR ကိုဖြေရှင်းပြီးပြီဖြစ်သည်
Coronavirus ၀ တ္ထုတွင်ဆဲလ်များကိုကူးစက်စေသည့်ယန္တရားတွင်ယခင်ကမသိသောအဆင့်ကိုသုတေသီများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ဖူးသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက SARS-CoV-2 သည် neuropilin-1 လို့ခေါ်တဲ့အဲဒီ receptor နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်၊
123 ... 215 လာမယ့်